Isizinda se-Ultrasonic Algae Extension for Izakhamzimba Zokudla - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokuphazamisa amaseli e-algae ngokuphumelelayo nangokushesha. I-Sonication ingakhipha inani eliphelele lamakhompiyutha e-bioactive, elenza ukuthi inqubo ye-ultrasonic isebenze kahle kakhulu.
Ungawasusa Kanjani Amaprotheni, amaLipids namaPhenolics kusuka ku-Algae nge-Ultrasonics
Izinhlobo ze-Algal nezama-microalgal zicebile kumakhemikhali asebenzayo wezinto eziphilayo njengamaprotheni, ama-lipids, ama-carotenoids, ama-pigment (isib. phycocyanins, Astaxanthin njll.), ama-phenolics nama-polysaccharides. Lokhu kubenza babe yinto yemvelo esetshenziswa kabanzi ukukhiqiza izithako zokudla nezithasiselo zokudla. Izinhlobo ezisetshenziswa kakhulu zama-algae kwezithako zokudla okunempilo Arthrospira maxima futhi (okwaziwa nangokuthi yi-spirulina), Chlorella vulgaris, I-Haematococcus pluvialis, futhi I-Ulva spp. Ama-algae aziwa njengomthombo omuhle wamaprotheni asezingeni eliphakeme, ama-lipid, ama-PUFAs amade (ie omega-3), ama-polysaccharides (isib. Alginate, carrageenan, β-glucans), amavithamini, nama-antioxidants.
I-Spirulina itholakala kabanzi futhi ihlala isetshenziswa uhlobo lwe-algae, olunothile ngamanani aphezulu we-bioactive aphezulu njengamaprotheni (nge-50-70% wt eyomile). Njengoba i-Spirulina ivunyelwe yi-FDA (Ukuphathwa Kwezidakamizwa Zokudla e-United States) njenge-GRAS (Ngokuvame Ukuqashelwa Njengokuphephile), izithasiselo ze-spirulina ne-spirulina zingasetshenziswa ekudleni okuthengisiwe noma njengezithasiselo zokudla.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Algae Extraction
Isizinda se-Ultrasonic sidlula ezinye izindlela zokukhishwa kumaphuzu amaningi, njengokukhiqiza okuphezulu, ukuthembeka, ukuphepha, ukwelula, kanye nobungani bemvelo.
Ama-ultrasonicators asebenza ngokuphezulu aphula amaseli we-algae avuleke futhi awaphazamise ukuze kukhishwe impahla esetshenziswayo yangaphakathi. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kukhipha ngaleyo ndlela isibuko esigcwele samakhompiyutha e-bioactive, anjenge-phycobiliproteins, carotenoids kanye ne-lipids kanye ne-phenolics.
Ama-phycobiliproteins angahlukaniswa ngamaqembu amathathu amakhulu, okungukuthi ama-chloro-phycocyanins, ama-allophycocyanins nama-phycoerythrins. I-C-Phycocyanin iyi-pigment eluhlaza okwesibhakabhaka yemvelo, esetshenziswa kabanzi ekudleni nasemikhiqizweni yemithi. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kukhipha inani eliphelele lamaprotheni.
Ukusebenza Kokugcwala Okuphezulu
UDuangsee et al. (2009) ihlole izindlela ezimbili ezihlukile zokukhipha isizinda (isisusa se-solvent kanye nokususwa kwe-solvent ngokuphindaphindwe okokuqothula nokucwilisa) kwamakhompiyutha we-biioass ase-Arthospira biomass futhi athola ukuthi ukukhipha i-solution ye-ultrasonic kuholele ekusebenzeni kokukhipha okuphezulu (22,1%) kunokuqandisa nokuqothula ( 15.6%). Ukuqhathaniswa kweseli phakathi kokushiswa kwamakhaza nokuqandeka okuphindaphindiwe kukhombisa ukuthi i-sonication isebenza ngokwengeziwe. I-Ultrasonic cavitation iphazamisa amaseli e-algae ngokushesha nangokuphumelelayo okuholela ekuphazanyisweni okukhulu kwamaseli uma kuqhathaniswa namaseli we-spirulina aphathwa yiqhwa eliphindaphindwayo nokuqunjelwa.
I-Sonication yayisebenza ngempumelelo kakhulu ekuphuleni imvilophu yeseli uma iqhathaniswa nokuqandeka nokuphindaphindwa. Isithako sokukhishwa kwe-phycocyanin sikhombisa ukuthi izinga lokushisa lokucubungula lalinethonya ukusebenza kahle kwesizinda.
Amasistimu we-ultrasonic osebenza ngokuphezulu angasebenza amandla aphezulu we-ultrasound nge-amplopes ephezulu ekungenisweni kwe-algae. Lokhu kwenza isizinda se-ultrasonic sibe indlela yokushesha esheshayo.
I-Ultrasonication iyindlela engenzi i-thermal, ekhethekile yokwenza. Izinga lokushisa lokukhipha lingalawulwa ngokuqondile kusetshenziswa inzwa yokushisa ye-plugable, edonsa intambo ku-Hielscher ultrasonicator yedijithali. Isoftware ye-Hielscher's digital ultrasonicators ivumela ukusetha umkhawulo wokushisa, ukuze i-homogeniser ye-ultrasonic ikhefu lapho umkhawulo wokushisa ufinyelelwa. Ukulawulwa okuqondile kwezinga lokushisa kuvumela ukuvimbela ukonakaliswa okushisa okwenziwe kwezinto ezithinta ukushisa njengama-phycobiliproteins, amavithamini, ama-polyphenols, ama-polysaccharides, ama-lipids nezinye izinto ezixubile.
Isebenzisana nama-solar ahlukahlukene
I-Ultrasonication iyahambelana cishe nanoma yikuphi ukuncibilika. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuhlanganiswe nama-sol sol green njengamanzi noma i-ethanol kukhiqiza okukhishwe kuhlanzekile. Lezi zinto ezikhishwa nge-ultrasonic zingafakwa ngokuphephile ekudleni kusukela lapho i-solan solution ethanol namanzi zinesimo se-GRAS (Ngokubanzi Ngokubanzi Njengokulondekile).
Ukuphinda ubonakale futhi kusebenze inqubo
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher digital eza ne-software ehlakaniphile nezinhlobonhlobo eziningi zezilungiselelo zamapharamitha wokukhishwa afanele. Izivumelwano zesoftware yonke inqubo yenqubo ye-ultrasonic (isib. Amplitude, amandla net, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi, isikhathi, usuku) bese ibhala idatha ye-sonication kufayela le-CSV ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi wenze ngokwejwayelekile inqubo yakho yokukhishwa futhi ubhekele i-sonication nekhwalithi yokukhipha ngokuseduze. Lezi zici zikusiza ukufeza izidingo zokuqinisa inqubo kanye Nezenzo Zokukhiqiza Okuhle (i-GMP), ezibaluleke kakhulu lapho kukhishwa izithasiselo zokudla, ukudla noma imikhiqizo yezemithi.
I-Ultrasonic Phycocyanin Extraction Protocol
Mazumder et al. (2017) kuphenywe amapharamitha wokucubungula okulungile wokukhishwa kwe-phycocyanin nama-phenolics e-Arthospira platensis. Isivuno esikhulu se-phycocyanin (29.9 mg / g) kanye ne-phenolics ephelele (2.4 mg / g) sitholwe kuma-40% ethanol okuhlushwa, ama-34.9 ° C okushisa okukhishwa kusetshenziswa i-ultrasonicator UP50H (50 watts, 30kHz) endaweni ephakeme yama-95% nge isikhathi sokukhishwa se-104.7 sec.
UVernès et al. (2019) wasebenzisa a UIP1000hdT (1000W, 20kHz) i-ultrasonicator ukukhipha amaprotheni ku-spirulina. I-ultrasonicator ifakwe i-sonotrode ye-BS2d34 ne-reactor ye-ultrasonic flow (bheka isithombe esingezansi ukuthola isethaphu ye-ultrasonic ngqo ne-flow cell ne-Seepex pump).
I-UIP1000hdT – I-Manothermosonication (MTS) isethaphu ngaphandle kokukhishwa kwethu ngamaphrotheni kusuka ku-spirulina ngezinga lelebhu
Umthombo: Vernes et al. 2019
Imiphumela yocwaningo ikhombisa ukuthi izimo zokufakelwa kwe-ultrasonic ezenziwe kahle ukuze zivelise amaprotheni zibandakanya okushisa okuphezulu nokuphakama (okubizwa nge-manothermosonication MTS). I-MTS ikhuthaza ukudluliselwa ngobuningi futhi inika amandla ukuthola amaprotheni angaphezu kwama-229% (28.42 ± 1.15 g / 100 g wt.) Kunenqubo ejwayelekile ngaphandle kwe-ultrasound (8.63 ± 1.15 g / 100 g wt eyomile).
Ngo-28.42 g wamaprotheni atholwe nge-100 g ye-spirulina biomass eyomile ekhishwe, isilinganiso sokutakula amaprotheni angama-50% satholakala ngemizuzu eyi-6 kuphela inqubo eqhubekayo ye-sonication. Ukucabanga kweMicroscopic kwembula ukuthi i-acoustic cavitation ithinta ukungcola kwe-spirulina ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengokuqhekeka, i-sonoporation, i-detexturation. Le miphumela ehlukahlukene yenza ukukhipha, ukudedela nokwenziwa kwe-solubilization ye-spirulina bioactive compounds kube lula futhi kusebenze kakhudlwana, okuholela ekuvuneni okukhulu kwamaprotheni kwekhwalithi ephezulu.
Ngokuphathelene nekhwalithi yamaprotheni akhishwe yi-ultrasonic, ama-amino acid awonakaliswanga ukwelashwa kwe-ultrasound, kepha akhona ngobuningi obukhulu esimweni se-sonication uma uqhathanisa nokukhipha okuvamile.
Lapho i-manothermosonication kanye nokukhishwa kwe-ultrasonic ngaphandle kwengcindezi ephakeme kanye nokushisa kuqhathaniswa, umehluko wokukhipha isivuno kanye nokusebenza kahle kuphela. Ngakho-ke, i-ultrasound kuphela ibhekwa njengenqubo yezomnotho elula nekulula ukukhiqiza ikhwalithi ephezulu ekhishwe ngamaprotheni e-spirulina. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela eluhlaza, enobungani yokususa imvelo efanelekile ukukhipha amaprotheni e-spirulina esikhungweni selabhorethri, esingabalwa kalula nje kube yisilinganiso sokushayela kanye nezimboni zezimboni. (cf. Vernès et al. 2019)
UP400St kwesizinda se-Ultrasonic se-Algae ku-8L Batch
Yonke imiphumela yokususa etholwe ngezinga elincane, ingalinganiswa ngokuqondile kumakhono amakhulu wokukhiqiza. I-Hielscher Ultrasonics enkulu yomkhiqizo iphothifoliyo kusuka kwelebhu kuya ezinhlelweni zokukhishwa kwezimboni ine-ultrasonicator efanele kakhulu umthamo wakho wenqubo ocatshangelwe. Abasebenzi bethu abanesipiliyoni eside bazokusiza ekuhlolweni kokusebenza okungenzeka futhi basebenzise ukufakwa kohlelo lwakho lwe-ultrasonic kuzinga lokukhiqiza lokugcina.
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lokukhipha okuphezulu kokusebenza kwe-ultrasonic kusuka kokuncane kuya kwesilinganiso esikhulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela umhlangano olula wokucushwa kwe-ultrasonic wedivayisi ofanele kakhulu wenqubo yakho. Ukusetha okulungile okuphezulu kakhulu kuya ngokuhambelana nomthamo ocatshangelwe, ivolumu, izinto ezingavuthiwe, inqubo ye-batch noma emugqeni wesikhathi kanye nomugqa wesikhathi. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Khetha kusuka kuzesekeli ezahlukahlukene ezifana:
ama-sonotrodes anamasayizi ahlukahlukene, ama-diameter nobukhulu
I-sonotrodes ye-amplitude ephezulu ye-200µm nangaphezulu
flow cell reactors enamavolumu ahlukahlukene namajiyometri
izimpondo eziningi zokulekelela ukuze ukhuphule noma unciphise izinzuzo
setha okugcwele kwe-sonication njenge-SonoStation, okubandakanya isitholi se-ultrasonic, ithangi, i-agitator, kanye nephampu
izinzwa zokushisa eziguquguqukayo
izinzwa zokucindezela ezisebenzayo
Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe nabasebenza isikhathi eside bazokubonisana futhi bakuncome uhlelo olufanele kakhulu lwe-ultrasonic ngezidingo zakho zenqubo yokukhipha izithako!
ISpirulina, okuyigciwane le-prokaryotic, inothile kwimibala efana ne-carotenoids, chlorophyll, ne-phycocyanin. I-Carotenoids (isib. Β-Carotene, i-orenji ephuzi e-orenji), i-chlorophyll, ne-phycocyanin ingatholakala ku-0.4, 1.0 no-14% wt owomile, ngokulandelana. I-Phycocyanin iprotheni eluhlaza okwesibhakabhaka, ebizwa ngokuthi i-biliprotein, etholakala kuma-photosynthetic lamellas ku-membrane ye-cytoplasmic ye-cyanobacteria.
Isetjenziswa njengesengezo sokudla nokudla okulula, isengezo sokudla okunempilo kanye nezicelo zokuxilonga i-immuno-diagnostic.